‘सङ्गीतको तलाउमा डुबुल्की मार्दै रचना रिमाल’ « Postpati – News For All
‘सङ्गीतको तलाउमा डुबुल्की मार्दै रचना रिमाल’
रसुवाली कवी पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
सङ्गीतको गहिरो तलाउमा डुबुल्की मारिरकेकी छिन पूर्वी नेपालको एउटा चर्चित जिल्ला झापाकि किशोरी रचना रिमाल । राजनीतिको गर्मी चढीरहने पुर्बी काकरभिट्टा नाकामा कहिलेकाही देशभक्तीको स्वर पनि सुनिन्छ । भारतीय बजारबाट ट्रकले बोकेर ठुलो अर्थतन्त्र छिर्छ यो नाकाबाट अनि कहिलेकाही सङ्गीतको तरङ्ग बोकेर शहर छिर्छ झापा । यसपटक पनि झापा चर्चामा छ । रचना रिमाल चर्चामा छिन । कारण हो नेपाल आइडल । नेपाल आइडलको उनी लोकप्रिय प्रस्तिस्पर्दी हुन । यो चर्चासंग उनले बाचेको समाज र उनको उमेर पनि जोडिन्छ ।
दुई दशक पनि यो धर्तीमा नबिताएकी रचना रिमाल यतिखेर सारा नेपालीको ध्यान खिच्न सफल छिन । डराउदै मंच चढिरहेकी रचनालाई केहीले आलोचना गर्दै भनेका देखिन्छ यिनको स्वरमा आत्मविश्वास छैन स्वर छिप्पिएको छैन । यो कुरामा केही सत्यता पनि छ । उनी डराउदै गाउदैछिन ।
मैले सामाजिक संजालमा यिनिसंग सोधे रचनाजी तपाईं किन डराइ डराइ गीत गाउनु हुन्छ ? उनको जवाफ थियो कुनै स्टेज राम्रोसँग पाइला राख्न नसकेको किशोरबय रहेकी एउटा केटी हुँ । अलिअलि डर हुन्छ नै । तर मेहनत साधना र निरन्तरताले डरलाइ जित्छ भन्ने लाग्छ । एकदिन म डरलाइ जित्छु ।
सपनाहरू धेरै छैनन् रचनासंग । एउटा घर बनाउने बाबालाई बाइक किनिदिने जीवन केही अति आवश्यक कुराहरु पुरा गर्ने । नेपाल आइडल जितेदेखि उनी सङ्गितमा झन बृहत रूपमा लाग्न सोचमा छिन । उनी आमा सम्झिन्छिन । बाबालाइ सम्झिन्छिन । आफ्नु बिगतलाइ सम्झदा उनी भावुक हुन्छिन । आफुलाइ भोट गरिरहेका दर्शक श्रोताप्रती आभार पनि ब्यक्त गर्छिन ।
उनमा इमानदारीता छ । त्यो जवाफ दिने शैलीले पनि प्रष्ट पार्छ । निम्न बर्गिय समाजको तस्वीर हेरेर भन्न सकिन्छ भुइँमान्छे रहरहरु सिमित हुन्छन् । रचनाका रहरहरु सिमित छन् । रचनाको सपनाले आकार लिइसकेको छैन । रचनाको गायनले बरु लय समात्दैछ् । बाटो बनाउदैछ् ।
मैले रचनालाई समाजसग जोडेर केही प्रश्न गरे । उनी नितान्त ब्यक्तिगत जीवनसंग जोडिएर उत्तर दिन थालिन । म अचम्ममा परे । किन उनी ब्यक्तिगत जीवन मात्र प्रदान मान्दैछिन । अनि घोत्लिए । यो उनी बाचेको समाजले सिर्जना गरेको स्वर हो ।
मसँग पैसा भयो भने बृद्दाश्रम खोल्छु । उनको रहर सपनासँग जोडिएको एउटा अध्यायले मलाई घोच्यो । नेपाली समाजको एउटा नमिठो यथार्थ यहिनेर जोडिएको छ । हामी कति अमर्यादित हुँदै गएका छौं । रचनाको यो निर्मम सपनाले बताउछ ।
नेपाल आइडल एउटा मंच हो । यो बिवादरहित छैन । संगीतलाई प्रतियोगिता गर्न हुन्छ कि हुँदैन । हामी बहस गर्न सक्छौ । तर नेपाली सङ्गितको क्षेत्रमा यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म भएको छ । जसलाई केही नयाँ प्रतिभाहरु जन्माइरहेको छ । रचना रिमाल पनि त्यही मेसोमा आएकी प्रतिभा हुन । जो नेपाली सङ्गीत आकाशमा फुल्दैछ्न ।
रचनाको बारे बोल्दै गर्दा एउटा आरोप लाग्न सक्छ सङ्गीत नबुझेको । हल्लाको पछी कुदेको । आरोप पनि हल्लाबाट आउन सक्छ ।
हो उनमा कमजोरी छ । उनले सिक्न बाँकी धेरै छ । बुझ्न बाकी धेरै छ्न । हिड्न पर्ने बाटो पनि लामो छ । एउटा पथिकले पहिलो पाइला कसरी चाल्यो होइन उ यात्राभर थाक्यो कि थाकेन ? मुख्य प्रश्न यहि हो । उनी बाचेको समयको नजरबाट उनलाई हेर्न आवश्यक छ । त्यहीबाट उनीलाई शुभकामना दिन जरुरी छ । जहाँ उनी उभिएकी छिन ।